Forex Trading အကြောင်းလေ့လာသင်ယူရန်အစပြုသူများ၊
ပညာရေး - ဆောင်းပါးများနှင့်သင်ခန်းစာများ - Forex အခြေခံဆောင်းပါးများ - တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် Forex Trading ကိုလေ့လာပါ
Forex ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။ Forex ကုန်သွယ်မှုအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်များ Forex ကုန်သွယ်အတွက်ခြေလှမ်းများ
ကုန်သွယ်ရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲတစ်ခုရွေးပါ
Forex ကုန်သွယ်ရေးမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ ကောက်ချက်
များစွာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိရိယာများအနက် Forex trading သည်သင်၏အရင်းအနှီးကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအခြေချရေးဘဏ် (BIS) မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်သုံးနှစ်ကြာဗဟိုဘဏ်၏စစ်တမ်းအရစာရင်းဇယားများအရ ၂၀၁၀ ခုနှစ်Aprilပြီလတွင် FX စျေးကွက်များ၌အရောင်းအ ၀ ယ်သည်ဒေါ်လာ ၆.၆ ထရီလီယံအထိရှိခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ကဒေါ်လာ ၅.၁ ထရီလီယံရှိခဲ့သည်။
သို့သော်ဤအရာအားလုံးသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း၊ သင်မည်သို့ Forex ကိုတစ်ဆင့်ချင်းလေ့လာနိုင်သနည်း။
ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်တွင် Forex နှင့်ပတ်သက်သည့်သင်၏မေးခွန်းအားလုံးကိုဖြေရှင်းပေးလိမ့်မည်။ ဒီတော့စဖွင့်ကြစို့
ကုန်စည်နှင့်စတော့အိတ်ချိန်းများကဲ့သို့အပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုတွင် Forex ကုန်သွယ်ခြင်းကိုမပြုလုပ်ပါ။ ၎င်းသည်ပါတီနှစ်ခုသည်ပွဲစားမှတစ်ဆင့်တိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်သည့်အရောင်းအ ၀ ယ်ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Forex စျေးကွက်ကိုဘဏ်များ၏ကွန်ရက်များမှတဆင့်လည်ပတ်သည်။ အဓိက Forex Trading စင်တာလေးခုမှာနယူးယောက်၊ လန်ဒန်၊ ဆစ်ဒနီနှင့်တိုကျိုဖြစ်သည်။ တနင်္လာနေ့မှသောကြာအထိတစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီကုန်သွယ်နိုင်သည်။ အစက်အပြောက် Forex စျေးကွက်၊ အနာဂတ် Forex စျေးကွက်နှင့်ရှေ့ Forex စျေးကွက်တို့ပါဝင်သော Forex စျေးကွက်သုံးမျိုးရှိသည်။
Forex စျေးနှုန်းများကိုတွက်ချက်သည့်ကုန်သည်အများစုသည်ငွေကြေးကိုကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူရန်အစီအစဉ်မရှိပေ။ စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှု၏အားသာချက်ကိုရယူရန်အစားငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုခန့်မှန်းသည်။
Forex ကုန်သည်များသည်အမြတ်ရရှိရန်အတွက်ငွေကြေးအတွဲ၏စျေးနှုန်းများမြင့်တက်မှုသို့မဟုတ်ကျဆင်းခြင်းကိုပုံမှန်မှန်းဆကြသည်။ ဥပမာယူရို / အမေရိကန်ဒေါ်လာအတွက်ငွေလဲနှုန်းသည်ယူရိုနှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာကြားရှိအချိုးတန်ဖိုးကိုပြသသည်။ ဒါဟာဝယ်လိုအားနှင့်ဝယ်လိုအားအကြားဆက်ဆံရေးကနေပေါ်ပေါက်။
အကယ်၍ သင့်တွင်ကွန်ပျူတာနှင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိပါက Forex အရောင်းအ ၀ ယ်တွင်ပါ ၀ င်ခြင်း၏အရေးကြီးဆုံးအခြေခံကိုသင်ပြီးမြောက်ပါပြီ။
ယခုတွင်သင်သည် Forex စျေးကွက်၏လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုများရှိနေပြီ ဖြစ်၍ Forex trading ကိုတစ်ဆင့်ချင်းမည်သို့လေ့လာရမည်ကိုလေ့လာကြပါစို့။
အမှန်တကယ်ကုန်သွယ်မှုမစတင်မီ ဦး စွာစဉ်းစားရန်လိုအပ်သောအရာအနည်းငယ်ရှိသည်။ ဤအဆင့်များသည်သင်၏သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါရွေးချယ်ခြင်း ညာဘက်ပွဲစား သင်ပွဲစားမပါဘဲအွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ်မလုပ်ဆောင်နိုင်သကဲ့သို့မှားယွင်းသောပွဲစားတစ် ဦး ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုအတွက်အလွန်ဆိုးရွားသည့်အတွေ့အကြုံတစ်ခုအဖြစ်အဆုံးသတ်နိုင်ခြင်းကြောင့် Forex trading အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောခြေလှမ်းဖြစ်သည်။
ပွဲစားသည်စျေးပေါသောအဖိုးအခများ၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောသုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်နှင့်အခြားအရာအားလုံးကိုကမ်းလှမ်းသည်ကိုသေချာအောင်လုပ်သင့်သည် သရုပ်ပြအကောင့်.
နှင့် သရုပ်ပြအကောင့်ပွဲစားကသင့်တော်လား၊ မကိုက်သည်ကိုသင်ရှာနိုင်သည်။ သင်၏ Forex နည်းဗျူဟာများကိုလည်းစမ်းသပ်ခွင့်ပြုသည်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကသင့်အားတစ်ခုခုပေးလိုလျှင်သို့မဟုတ်အလွန်ဆိုးဝါးသောအခြေအနေများတွင်ကမ်းလှမ်းရန်ဆန္ဒရှိပါကသင်သံသယဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏မူလနိုင်ငံ၏အာဏာပိုင်များကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည့်တည်ထောင်ထားသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုသို့သွားရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည်။
၎င်းသည် FXCC (သို့မဟုတ်အခြားတန်ပြန်ပါတီတစ်ခု) သည်ဖောက်သည်တစ် ဦး ထံမှငွေကြေးစနစ်ကိုဝယ်ယူရန်ကမ်းလှမ်းသောစျေးနှုန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ ယ်ယူသူအားရာထူးတစ်ခုရောင်းရန် (တိုတောင်းပါက) ဖော်ပြလိုသောစျေးနှုန်းဖြစ်သည်။
FXCC (သို့မဟုတ်အခြားတန်ပြန်သူတစ် ဦး) ကရောင်းချသောငွေကြေး (သို့) တူရိယာကိုရောင်းချသောဈေးနှုန်းဖြစ်သည်။ The Ask or Offer ဈေးနှုန်းသည်ထိထိရောက်ရောက် ၀ ယ်လိုသောနေရာတွင် ၀ ယ်လိုသူသည်ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ငွေကြေးများကိုအမြဲအတွဲလိုက်ကုန်သည်၊ ဥပမာ၊ EUR / USD ။ ပထမငွေကြေးသည်အခြေခံငွေကြေးဖြစ်ပြီးဒုတိယမှာမူငွေလဲနှုန်းဖြစ်သည်။ ဤသည်ကအခြေခံငွေကြေးကို ၀ ယ်ရန်ကိုးကားငွေမည်မျှလိုအပ်သည်ကိုပြသည်။
- ကော်မရှင် / အခကြေးငွေ
စျေးကွက်အမှာစျေးသည်သတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းအပေါ်အခြေခံသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုကဲ့သို့သော ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းချရန်အမိန့်ပေးလျှင်ကုန်သွယ်မှုသို့မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်ပို့ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်။
ကန့်သတ်ချက်သည်ကုန်သည်ကိုစျေးနှုန်းကန့်သတ်ချက်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည် ငွေကြေးအားလုံး ဝယ်ယူသို့မဟုတ်ရောင်းချကြသည်။ ၎င်းသည်အချို့စျေးနှုန်းများကိုကုန်သွယ်ရန်နှင့်စျေးအလွန်အကျွံမ ၀ ယ်သောစျေးနှုန်းများကို ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်စျေးသိပ်မကြီးသောစျေးနှုန်းများကိုရှောင်ရှားရန်ခွင့်ပြုသည်။
- Stop-loss အမိန့်
Stop-loss order ဖြင့်ကုန်သည်သည် အကယ်၍ စျေးနှုန်းသည်ဆန့်ကျင်ဘက်ဘက်သို့သွားလျှင်ကုန်သွယ်မှုတွင်ဆုံးရှုံးမှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေနိုင်သည်။ ငွေကြေးစုံတစ်ခု၏စျေးနှုန်းသည်သတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းသို့ရောက်ရှိသွားပါကအမိန့်ကိုသက်ဝင်သည်။ ကုန်သည်သည်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုဖွင့်လှစ်စဉ်တွင်ရပ်တန့်နိုင်သည့်နေရာ (သို့) ကုန်သွယ်မှုကိုဖွင့်ပြီးမှပင်နေရာချနိုင်သည်။ Stop-loss order သည်စွန့်စားရမှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်အဓိကကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Forex သည်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေစဉ်ကုန်သည်များသည်ကုန်သွယ်ရေးအနေအထားကိုဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အရင်းအနှီး၏အနည်းငယ်မျှသာလိုအပ်သည်။ ဒီမတည်ငွေရင်းကို margin လို့ခေါ်တယ်။
PIP Forex ကုန်သွယ်အတွက်အခြေခံယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာငွေကြေးစုံ၏စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုကိုညွှန်ပြ။ တစ် ဦး က pip 0.0001 ၏သင်တန်းပြောင်းလဲမှုနှင့်ကိုက်ညီ။
အများကြီးဆိုသည်မှာ Forex trading တွင်အခြေခံငွေယူနစ် ၁၀၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ခေတ်မီသောပွဲစားများသည်ယူနစ် ၁၀၀၀၀ နှင့်အသေးစားစာရေးနည်းစနစ်များနှင့်အသေးစားငွေချေးစာချုပ်များကိုယူနစ် ၁၀၀၀ နှင့်အတူမြို့တော်နိမ့်ကျသည့်ကုန်သည်များအားကမ်းလှမ်းသည်။
ထူးခြားဆန်းပြားသောအတွဲများအား“ အဓိက” များကဲ့သို့မကြာခဏရောင်းဝယ်ခြင်းမပြုပါ။ ၎င်းအစား၊ သူတို့သည်အားနည်းသောငွေကြေးများဖြစ်သော်လည်း၊ ယူရို၊ အမေရိကန်၊ သို့မဟုတ် JPY တို့နှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ပို၍ တည်ငြိမ်မှုမရှိသောဘဏ္systemsာရေးစနစ်ကြောင့်ထူးခြားဆန်းပြားသောငွေကြေးအတွဲများသည်အများအားဖြင့်တည်ငြိမ်သောဗိုလ်ကြီးများထက်သိသိသာသာပိုမိုတည်ငြိမ်မှုရှိသည်။
Volume ဆိုသည်မှာတစ်စုံတစ်ရာသောငွေကြေးစနစ်တစ်ခု၏ကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုဆိုလိုသည်။ တခါတရံ၎င်းကိုတစ်နေ့တာကုန်သွယ်ရေးကန်ထရိုက်စုစုပေါင်းအဖြစ်လည်းစဉ်းစားသည်။
“ ရှည်လျားစွာသွားခြင်း” ဆိုသည်မှာထိုငွေကြေးအတွဲ၏စျေးနှုန်းမြင့်တက်မည်ဟုမျှော်လင့်သောငွေကြေးအတွဲတစ်ခုကိုဝယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ စျေးနိမ့်ဝင်ဈေးထက်မြင့်တက်လာသောအခါအမှာစာသည်အမြတ်အစွန်းဖြစ်လာသည်။
တိုသောငွေကြေးအတွဲတစ်ခုအတိုချုပ်ခြင်းသည်သင်ကငွေကြေးအတွဲ၏စျေးနှုန်းကျလိမ့်မည်ဟုသင်မျှော်လင့်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ စျေးနှုန်း entry ကိုစျေးနှုန်းအောက်တွင်ကျဆင်းသွားသည့်အခါအမိန့်အမြတ်အစွန်းဖြစ်လာသည်။
swap အကောင့်မရှိသောပွဲစားသည်မည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးအနေအထားကိုနေ့ချင်းညချင်းကိုင်ဆောင်ထားခြင်းအတွက် rollover အခကြေးငွေမယူပါ။
- Standard အကောင့်
ယခုလက်ရှိအွန်လိုင်း Forex ပွဲစားများသည်အကောင့်အမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ သင့်တွင်အထူးလိုအပ်ချက်များသို့မဟုတ်ဆန္ဒများမရှိပါက၊ ပုံမှန်အကောင့်ကိုထိန်းသိမ်းထားပါ။
အကောင့် mini က Forex ကုန်သည်များသည်အသေးစားကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။
မိုက်ခရိုအကောင့်တစ်ခုက Forex ကုန်သည်များကို micro-lot များရောင်းဝယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ကြေးမုံအရောင်းအဝယ်သည်ကုန်သည်များသည်အခြားအောင်မြင်သောကုန်သည်များ၏အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုသတ်မှတ်ထားသောအခကြေးငွေမှအလိုအလျောက်ကူးယူရန်ခွင့်ပြုသည်။
အမှန်တကယ်ဖြည့်သည့်စျေးနှုန်းနှင့်မျှော်မှန်းထားသောဖြည့်သည့်စျေးနှုန်းတို့အကြားကွာခြားချက်ကို slippage ဟုခေါ်သည်။ စျေးကွက်အလွန်မတည်ငြိမ်သောအခါ slippage များသောအားဖြင့်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
- ဦး ရေပြား
ဉီးခေါင်းရေ ရေတိုကုန်သွယ်စတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းကြားကာလသည်စက္ကန့်အနည်းငယ်မှမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းကွဲပြားနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိုပါတယ် သရုပ်ပြအကောင့် မည်သည့်စွန့်စားမှုမဆို Forex trading ကိုစမ်းကြည့်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ပထမဆုံး FX အတွေ့အကြုံကိုအန္တရာယ်မရှိဘဲရရှိနိုင်သည်။
သရုပ်ပြအကောင့်သည်ဥပမာတစ်ခုကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည် အစစ်အမှန်အကောင့် ကန့်သတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အတူ။ ဒီမှာရောင်းဝယ်မှုအတွက်သင်သုံးနိုင်တဲ့ virtual ပိုက်ဆံရှိတယ်။
4. ကုန်သွယ်ရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲတစ်ခုရွေးပါ
အချို့ပွဲစားများသည်သီးသန့်ဝက်ဘ်ရောင်းဝယ်မှုပေါ်တယ်ကိုအခြား FX ပွဲစားများကသင့်အားသီးခြား software သို့မဟုတ် app တစ်ခုပေးသည်။ ပွဲစားအများစုသည်လူကြိုက်များသည် MetaTrader ကုန်သွယ်ရေးပုံစံ.
အကယ်၍ သင်သည်အင်တာနက်ကိုအသုံးမများသောဘရောက်ဇာများမှတဆင့်အသုံးပြုပါကသင်၏ FX ပွဲစားက၎င်းကိုမထောက်ပံ့ဟုယူဆရမည်။ Forex ပွဲစားနှင့်ကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်ရန်အတွက်သင်သည်ဤကိစ္စတွင်အက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုရမည် - သို့မဟုတ်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိဘုံဘရောက်ဇာများထဲမှတစ်ခုကိုထည့်သွင်းရမည်။
Forex အရောင်းအများတွင်လုပ်နေကြသည် ငွေကြေးအားလုံး သာ။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်ငွေကြေးအတွဲ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဆုံးဖြတ်ရမည်နည်း။ အများအားဖြင့်ဗိုလ်ကြီးများနှင့်အရွယ်မရောက်သေးသူများကိုရနိုင်သည်။ လူကြိုက်အများဆုံးငွေကြေးအတွဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြသည် EURUSD, USDJPYနှင့် EURGBP.
ဆိုနိုင်ပါတယ် Forex မဟာဗျူဟာသေချာပေါက်အချက်လေးချက်ပါဝင်သည်:
သတ်မှတ်ထားသော entry ကိုအချက်ပြမှုများ
“ ဦး ရေပြား” ဟုခေါ်သောနေရာများတွင်ရာထူးများသည်အထူးသဖြင့်အချိန်တိုတောင်းသောကာလအတွက်ဖြစ်သည်။ စည်းကမ်းချက်အရသူတို့သည်ကုန်သွယ်မှုကိုသူတို့ဖွင့်ပွဲမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းပိတ်သိမ်းလိုက်သည်။ ဦး ရေပြားကျဆင်းချိန်တွင်ကုန်သည်များသည်ကုန်သွယ်မှုအပေါ် ၀ င်ငွေနိမ့်ကျမှုနှင့်ကျေနပ်အားရကြသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်အထပ်ထပ်ရေရှည်တွင်မြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းသို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။
In တစ်ရက်ကုန်သွယ်တစ်ရက်အတွင်းကုန်သွယ်မှုကိုဖွင့ ်၍ ပိတ်သည် နေ့ကုန်သည်သည်မတည်ငြိမ်သော Forex ဈေးကွက်တွင်ကာလတိုအတက်အကျကြောင့်အမြတ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားသည်။
Swing trading သည်အလယ်အလတ်ကာလကုန်သွယ်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်ပြီးကုန်သည်များသည်နှစ်ရက်မှရက်သတ္တပတ်များစွာအထိသူတို့၏ရာထူးကိုရယူပြီးလမ်းကြောင်းမှအမြတ်အစွန်းအများဆုံးရရန်ကြိုးစားသည်။
အနေအထားအရောင်းအ ၀ ယ်တွင်ကုန်သည်များသည်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမှအမြင့်ဆုံးအလားအလာကိုသိရှိရန်ရေရှည်လမ်းကြောင်းများကိုလိုက်နာကြသည်။
မည်သည့်အကျိုးတူလုပ်ငန်းမဆိုကဲ့သို့ Forex ကိုအရောင်းအဝယ်လုပ်သောအခါဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်အမြဲရှိသည်။ သင်၏အရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်ကိုက်ညီမည့်သင့်လျော်သော Forex trading မဟာဗျူဟာကိုသင်သတ်မှတ်ရမည်။ ပညာရှိစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် Forex trading မှအမြတ်အစွန်းများစွာရရှိနိုင်သည်။
Forex Trading အတွက်အကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းကဘာလဲ?
ပလက်ဖောင်းရွေးချယ်ခြင်းသည်အလွန်ပုဂ္ဂလဒိive္ဌာနဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏ကုန်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်သည်။ လူသိများအချို့ Forex Trading ပလက်ဖောင်း ပါဝင် MetaTrader4နှင့် MetaTrader 5. ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းအားလုံးသည်အခမဲ့မဟုတ်ပါ။ လစဉ်ထပ်ခါတလဲလဲအခကြေးငွေအပြင်အချို့သောပလက်ဖောင်းများသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့နိုင်သည်။
ကုန်သွယ်ရေး Forex တွင်အောင်မြင်ရန်မည်မျှခက်ခဲသနည်း။
Forex trading ဖြင့်ငွေရှာရန်အလေ့အကျင့်များစွာလိုအပ်သည်မှာသေချာသည်။ မှန်ကန်သောငွေကြေးစုံကိုရွေးချယ်ခြင်းအပြင်အောင်မြင်သော Forex ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လာရန်စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်မှုသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
အွန်လိုင်း Forex Trading သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိမည်ဟုကတိပြုသော်လည်း၎င်းတို့မှများစွာတောင်းဆိုသည်။ စနစ်တကျအွန်လိုင်း Forex အရောင်းအဝယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်နှင့် Forex trading မဟာဗျူဟာများနှင့်ကျယ်ပြန့်စွာကိုင်တွယ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သူများသာ Forex market သို့ဝင်ရောက်သင့်သည်။
အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားသည့်အကြံပြုချက်များနှင့်အညီသင်သည်သင်၏ပထမဆုံး Forex အတွေ့အကြုံရရှိရန်ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားပြီးနောက်ဆုံးတွင် Forex trading စတင်လေ့လာနိုင်သည်။